As of Sun, 09 Aug, 2020 19:50
विराटनगर-प्रदेश सरकारले १३ जना स्रष्टालाई नगदसहित सम्मान गरेको छ । आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि प्रदेशमा रहेर साहित्य, कला, गीतसंगीतका क्षेत्रमा सक्रिय स्रष्टाहरूलाई प्रदेश सरकारले पुरस्कृत गरेको हो ।
आचार्यको २ सय ७ औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर प्रदेश–१ सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ जना स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरे ।
सम्मानित र पुरस्कृत हुने स्रष्टाहरूमध्ये एकजनालाई १ लाख नगदसहित सम्मान गरिएको छ भने १२ जनालाई नगद ५०–५० हजारसहित पुरस्कृत गरिएको छ । कार्यक्रममा इलामका डा. नवलकिशोर राईलाई १ लाख राशिको ‘बालकृष्ण पोखरेल भाषा–साहित्य–कला सम्मान’ प्रदान गरिएको छ । यसैगरी अन्य १२ जना स्रष्टाहरूलाई ५० हजार नगद राशिसहित भाषा–साहित्य–कला सम्मान प्रदान गरिएको छ ।
अन्य स्रष्टाहरूमा ललितकलामा मोरङकी अनुराधा थापा, साहित्यतर्फ धनकुटाका उमानाथ घिमिरे ‘सागर’, साहित्यतर्फ मोरङकै कविराज पोखरेल, रंगकलामा झापाका कविता नेपाल र चलचित्रकर्मीमा मोरङका केशव रायमाझी पुरस्कृत भए ।
यस्तै साहित्यकलातर्फ सोलुखुम्बुका डिबी किराँती, नृत्यकलामा मोरङकी माया पौडेल, साहित्यतर्फ झापाका मुनाराज शेर्मा, साहित्यतर्फ नै खोटाङकी पञ्चकुमारी परियार र पाँचथरका प्रेम ओझा, गीतसंगीततर्फ मोरङका वीरध्वज शिवा तथा साहित्यतर्फ सुनसरीका शिवनारायण पण्डित ‘सिंगल’ छन् ।
सम्मान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सबै भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई समान रुपमा विकास गर्दै लगेमात्र सिंगो राष्ट्र सबल हुने विचार व्यक्त गरे । “प्रदेश सरकारले सबै भाषा, संस्कृति, कला र साहित्यको विकासमा समान रुपमा काम गरिरहेको छ,” मुख्यमन्त्री राईले भने, “भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकास बिना समग्र मुलुकको विकास हुँदैन ।”
कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेश–१ भाषा, साहित्य, कला र संगीतमा उर्बर भूमि रहेको चर्चा गरे । उनले स्रष्टाहरूको सम्मानलाई हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिने बताए । सो अवसरमा साहित्यकार प्रा. डा. भीम खतिवडाले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पारे ।
पुुरस्कार छनौट समितिका संयोजक प्राज्ञ खेम नेपालीले छनौट प्रक्रियाका विषयमा प्रकाश पारे । प्रदेश सरकारले स्रष्टा सम्मान गर्ने परम्परा सुरु गर्नु आफैंमा गर्वको विषय भएको उनको भनाइ थियो । भौगोलिकता र समावेशितालाई आधार मानेर छनौट गरिएको जनाए । “एकै वर्ष प्रदेशका सबै स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्न सम्भव छैन,” उनले भने । समारोहमा मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, छनौट समितिका सदस्य रामबाबु दाहाल, राजेश थापा, मधु पोखरेललगायतले मन्तव्य व्यक्त गरे । गत वर्षदेखि प्रदेश सरकारले भानु जयन्तीको अवसर पारेर स्रष्टा सम्मान सुरु गरेको हो ।